Iska-hor-imaad hubaysan oo ka dhacay miyiga degmada Rako ee gobolka Karkaar, una dhexeeya dad reer guuraa ah. – Radio Daljir
Rako, Nov 12 – Iska-hor-imaad hubaysana ayaa saaka ka dhacay deegaanno miyi ah oo ka tirsan degmada Rako ee gobolka Karkaar kuwaasi oo u dhaxeeyey dad reer guuraa ah oo deegaankaasi wada deggan.
Iska-hor-imaadka saaka dhacay ayaa la tilmaamayaa in uu ka curtay xoolo la kala dhacay, waxaana wararku ay sheegayeen in uu gaystay khasaarooyin kala duwan inkastoo aan wali si rasmi ah loo xaqiijin karin tiro dhimasho iyo mid dhaawac toona.
Deegaanka lagu dagaallamay ayaa lagu magacaabaa Madka-Xumbays, waana meel xoolo daaqeen ah oo ay degsiimooyin badan soo wada degeen bilihii ugu dambeeyey kaddib markii raxmadda rabbi ay si wanaagsan u doojisay.
Maamulka degmada Rako-raaco iyo waxgarad ka tirsan beelaha deegaankaasi ayaa la tilmaamayaa in ay u dhaqaaqeen deegaannada wax ka dhaceen si ay xaaladda u qaboojiyaan.
Guddoomiyaha degmada Rako-raaxo Faarax Maxamud Ibraahim oo xaaladdaasi Radio Daljir uga waramay ayaa tilmaamay in aysan wali u kala caddayn dhibaatada ka dhalatay isku-dhaca saaka, ayna hadda ku hawlan yihiin sidii arrintaasi wax looga qaban lahaa.
Isku-dhaca saaka ka dhacay deegaannada miyiga ah ee degmada Rago-raaxo ayaa daba-socda isku-dhacyo horay u dhex-maray jifooyinkaasi kuwaasi oo gaystay khasaarooyin dhimasho iyo dhaawac iskugu jira.